Momba anay - Certification Guangzhou MCM ＆ Testing Co., Ltd.
Mampifandray kely farafahakeliny
Ny MCM dia mifikitra amin'ny paikady fampandrosoana izay tokony hanohizan'ny orinasa madinidinika ny fanatsarana sy ny fitomboan'ny tanjaka hahatongavany ho lehibe kokoa ary tsy dodona hahita fahombiazana haingana. MCM mitazona ny fitoviana ary mifantoka amin'ny fanomezana serivisy fanamarinana sy fanamarinana ho an'ny vokatra bateria isan-karazany amin'ny fomba maharitra. Amin'ity fomba ity ihany no ahafahan'ny MCM tompon'andraikitra amin'ireo mpanjifany ary manolotra vahaolana lehibe amin'ny fomba maharitra.
Guangzhou MCM fanamarinana & andrana orinasa, dia ahitana ekipa multidisiplinary izay malaza amin'ny fanolorana serivisy voalohany amin'ny fanandramana sy fanamarinana vokatra bateria manerantany. Amin'ny maha iray amin'ireo vondrona antoko fahatelo tsy miankina tena matihanina amin'ny sehatry ny fitsapana vokatra bateria dia nankatoavin'ny CNAS, CMA, CBTL, CTIA miorina amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO / IEC 17025 & 17020 izahay.
INDRO IZAO MCM
Ilay fitenenana hoe Tsara daholo aloha, saingy vitsy no manaporofo ny tenany fa farany, nalaina tao amin'ny The Book of Songs, tononkalo sinoa taloha, no ninoan'ny ekipan'ny MCM hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 2003. Ity finoana ity dia mandrisika antsika hifantoka bebe kokoa amin'ny mpiara-mianatra. Ny MCM dia mifikitra amin'ny maody amin'ny serivisy izay manatsara hatrany sy mihamatanjaka ary koa maharitra amin'ny fanavaozana. Gaga foana ny MCM amin'ny mpanjifa amin'ny lafiny rehetra. Ankoatr'izay, ny MCM dia hanompo am-pahamalinana ny orinasa tsirairay mifototra amin'ny fangatahan'ny mpanjifa, manolotra serivisy ambony ho an'ny fivezivezena ara-barotra manerantany.
Address: Làlana 1 / F No.13, Làlana Shiguang, Distrikan'i Panyu, Guangzhou, Sina